Hargeysanews.com – 24 hours news channel – Drug And Alcohol Detoxification Centers | Detox Facility .net
“NABADNA DOONIMAAYO DAAWANA WAANRABAA”MAXAMED DHEERE,1/3/2006
Nabadna dooni mayno,dawana waan rabnaa??
Maxamed Dheere: Madaxweyne Yusuf hubkii laga soo siiyay Yemen wuxuu u qaybiyay maleeshiyadda beeshiisa,waxaana golaha amaanka ugu baaqeeynaa inaysan Somaliya ka qaadin cunaqabataynta hubka.
Waagacusub Online Jowhar
Gudoomiyaha Guddigga siyaasadda gobolka Shabeeladda dhexe Maxamed Cumar Xabeeb ayaa markii ugu horeeysay fariin kulul u diray golaha amaanka iyo shacabka Soomaaliyeed.
Gudoomiye Maxamed Dheere oo shir Jaraa’id ku qabtay Jowhar ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday in hubkii dowladda Yemen siisay dowladda Somaliya aanan loo maamulin sidii loogu tala galay balse Cabdilahi Yusuf u qaybiyay maleeshiyaad ku beela oo ay ka mid yahiin kuwa ku jira Xeradda Kongo ee duleedka Jowhar,kuwaa oo uu sheegay inay yahiin maleeshiyo beeleed aan la oran karin Ciidamo Qaran.
” Golaha amaanka waxaan ugu baaqeeynaa inay sii adkayso cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya,lana xisaabtanto dowladaha hubka soo gelinaya dalka “ayuu yiri Maxamed Dheere oo intaas ku daray in Cabdilahi Yusuf noqday Madaxweyne hogaanka u haya qabyaalad.
si kastaba ha ahaatee hadalka Maxamed dheere ayaa si wayn looga soo dhaweeyay goboladda dalka Somaliya,waxaana Muqdisho durbadiiba ka biloowday taageerayaal xoogan oo ku dhawaaqayo ha noolaado Maxamed dheere,Madaxweynaha Mustaqbalka ee dalka Somaliya.
Xeeldheerayaasha siyaasada ee Somaliya waxay leeyahiin MAXAMED DHEERE,wuxuu buris ku dhiftay qalbi Madaxweyne Yusuf,wuxuuna ka dhawaajiyay qodobo uu taageero iyo sumcad badan ku helayo.
Madaxweyne Yusuf ayaa lagu wadaa inuu ka jawaabo hadalka saaxiibkiisii siyaasadda ka dhawaajiyay ee ku lidka ah baaqii uu ku dalbaday in cunaqabataynta hubka laga qaado Somaliya sida ay ku waramayaan hoowlwadeenadda xafiiskiisa.
XIGASHO WAAGA CUSUB .COM